'चुच्चे नक्साको भ्रुणहत्या कसले गर्‍यो ?'
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले के चुच्चे नक्साको भ्रुण हत्या भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गिरीले सरकारसँग नागरिकले चुच्चे नक्साबारे सोधिरहेको भन्दै तत्काल जवाफ दिन माग गरे।
उनले भने, ‘चुच्चे नक्सा कता हरायो ? के चुच्चे नक्साको भ्रुण हत्या भएको हो ? राष्ट्रिय राजनीतिको सानो मोहोर मात्र थियो, सतरञ्जको खेलको एउटा प्याला मात्र थियो।’ संविधान सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्ने भएपनि अझै केही राजनीतिक शक्तिले संविधान अस्वीकार गरेकोले राजनीतिक अस्थिरता बढेको गिरीको भनाइ छ।
विगतमा पनि संविधान असफल भएका प्रशस्त उदाहरण रहेको भन्दै सांसद गिरीले संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्ने बताए। संविधान भर्खर रोपिएको बिरुवाजस्तै रहेको भन्दै सांसद गिरीले मलजल गर्नुको साटो जरा उखेल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौं या गर्दैनौं ? यही रूपमा गर्छौं या यथोचित संशोधन गर्छौं ? यस संविधानलाई हामीले सम्हाल्ने कि नसमाल्ने ? भर्खर रोपिएको बिरुवालाई मलजल गर्ने कि बिरुवा उखेलेर जरा हेर्ने ?,’ गिरीको प्रश्न थियो।
सांसद अथकले छुट्याए अक्सिजन सिलिण्डर खरिदका लागि ३० लाख
ओलीले विश्वासको मत लिँदा कति सांसद भए अनुपस्थित ?